Leanplum: A / B Nwalee ọdịnaya ekwentị na ozi gị | Martech Zone
Zụlite na itinye ngwa mkpanaaka nwere ike ịbụ usoro na-agwụ ike, na-ewe akụ ma na-akụda mmụọ maka ụlọ ọrụ. Naanị ịnweta ihu ọma site na Storelọ Ahịa canlọ Ahịa nwere ike ịbụ enyemaka mgbe ụfọdụ, echefula na ị nwere ike iji ngwa mkpanaka gị rụọ ọrụ. Ọ bụrụ n’ịchọta na ohere dịịrị iji melite ma ọ bụ hazie ngwa ahụ, ọ pụtara mmepe ọzọ na nhapụ ọhụrụ. Enwere uzo ndi ozo di.
Leanplum bụ ihe ejikọtara na njikarịcha njikarịcha maka ngwa mkpanaka iji nyere ụlọ ọrụ aka ịbuga ngwa mkpanaka ebe ha nwere ike ịnwale, nyochaa, hazie ma hazie ahụmịhe onye ọrụ na izi ozi.
Leanplum si Platform na-enye ohere maka ịhazi onwe, nnwale na njikarịcha
Mobile App A / B Ule - Nnwale ọdịnaya, mkpọsa ozi, ihe ndị a na-ahụ anya, na UI na-efe iji bulie ahụmịhe onye ọrụ mkpanaka na nnwale dị adị n’ezie nke na-achọghị ntinye ahịa Storelọ Ahịa App. Onye ọrụ ahụ nwere ike itinye ule na ngalaba ndị ahịa ma lelee ule A / B dabere na ọdịdị ala, ụdị ngwaọrụ, ụdị ngwa, isi mmalite okporo ụzọ, njirimara ndị ahịa, ọdịmma, mmasị na omume ime-ngwa.
Njikwa ọdịnaya ekwentị - Hazie ma bipụta ọdịnaya ekwentị na-agbanwe agbanwe dabere na omume, omume igwe mmadụ, ọnọdụ na njirimara ndị ọzọ. Mekọrịta, chekwaa ma tinye akụ mkpanaka na oge, yana nchekwa agbakwunyere, ịmekọrịta, na nkwado na-anọghị n'ịntanetị. Hapụ atụmatụ ọhụrụ na-enweghị mkpa maka ntinyeghachi na ụlọ ahịa App na ọbá akwụkwọ akụ bara ụba. Nke a gụnyekwara API na-agbanwe ihe ngosi data.
Akpaaka Ahịa Mobile - Mepụta, machiini, ma nwalee ozi mkpanaka na mkpanaka na ozi ịkwanye iji bulie njikọ ndị ọrụ, njigide na iguzosi ike n'ihe. Tinyere A / B na-anwale izi ozi, ịnwere ike imelite ozi na ịmalite mkpọsa na oge, ma ọ bụ mepụta oge na ihe omume dabere.
Nchịkọta Ngwa Mobile - nyochaa data dabere na omume gara aga, ụdị ngwaọrụ, ọdịdị ala, isi iyi okporo ụzọ, na njirimara njirimara ndị ọrụ. Mepụta ntughari ntụgharị, nke dabere na omume ma ọ bụ oge, ma lelee usoro nkịtị.
Tags: gbamgbamngwa mkpanaka ab nwaamobile ngwa nyochamobile ngwa nchịkọta funnelsgbasara omume akụrụngwangwa mkpanaaka ngwanjikarịcha ngwà mkpanaka ngwàmobile ngwa ike ọdịnayaobodo ezubere iche maka ngwaakpaaka ngwa ahịa akụrụngwamobile ngwa izi oziekwentị mkpanaaka metricsnjikarịcha ngwa mkpanakangwa mkpanaka nke ejiri ngwa mkpanaakangwa mkpanaka ngwa ngwannyeghachi nke ngwa mkpanaakamobile ngwa nkewaezubere iche maka ngwa mkpanaakannwale ngwa mkpanakamobile ngwa triggered oziule anwale